Ugu Weyn Ee Radish
Guryaha waxtarka leh ee radishes, iyo sida loo isticmaalo daawada dhaqameed
Riisku waa mid ka mid ah khudradda caadiga ah ee la jecel yahay iyo kuwa caafimaadka leh ee ku jira cirqiga. Si kastaba ha ahaatee, dad yar ayaa ogaanaya heerka dhabta ah ee hantida faa'iidada leh iyo suurtogalnimada isticmaalka geedka nolosha. Waxyaalahan waxaan isku dayi doonaa inaan qiimeyno dhammaan faa'iidooyinka. Dabocase: halbeeg aad u qurux badan Sidaas, sababta dabocase faa'iido leh? Waxaa ku jira fiitamiinada PP, kooxda B, iyo fitamiin C
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Radish 2019